Indlela ukubhaka isinkwa kuhhavini
fresh Homemade isinkwa elimnandi! injabulo yasezulwini, okuyinto, ngeshwa, ingabe ngaso sonke isikhathi ukuthi sifinyelele ngenxa yokungabi nesikhathi esanele, kanye nokungakwazi ukupheka zokupheka kagogo. Kodwa ungakhathazeki, umbuzo indlela ukubhaka isinkwa kuhhavini, kungaba impendulo isobala. Kubalulekile kuphela ukulandela ezinye izinyathelo, ngasinye esizokhuluma ukubhala ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Ngo esigabeni sokuqala, udinga ukukhetha ufulawa kwesokudla. Ngokuvamile, ukuba abhake izinkwa kuhhavini, ukusithatha ufulawa kakolweni noma rye. Uma ufuna Ngamangala umndeni wakho ube mhlophe, ukungena nakwamanye amazwe, okusanhlamvu okusezingeni eliphezulu, ukuthenga ukolo ufulawa emhlophe. Ngakho, befuna ukubhaka rye isinkwa, ukuthenga ufulawa rye. Ukungazi ukuthi yini okwakufanele makudle ufulawa, landela lezi amathiphu: ukuthenga ufulawa kakolweni njengoba izikhathi zokuqala isitofu, senziwe ngofulawa rye ukuba nzima. Rye ufulawa wayixova kanzima, ezidinga umzamo omkhulu emzimbeni.
Esigabeni esilandelayo, ufulawa kumele ngempela bahlolwe. Hhayi njengoba ezibizayo ukuthenga ngesihlungo, okuzokwenza ukhokhe ruble 50-100 nje. Ngenxa ukuboniswa, ufulawa ayegcwele oksijini, okuholela ukuthungwa ukungena nakwamanye amazwe lwesinkwa.
Noma bayobhaka isinkwa recipe kuhhavini ngeke uvele eziyinkimbinkimbi, kubalulekile kuphela ukuze ungeze zonke izithako, kuhlanganise amaqanda, imvubelo, amafutha yemifino, izinongo, amakhambi kanye notshani. Futhi esikhathini esizayo, imibuzo abangane, indlela ukubhaka isinkwa kuhhavini futhi okudingeka ukwenze, uzokuphendula kalula.
Lapho zonke izithako axutshwa, baqala uxove inhlama kahle. Inqubo ngokwaso kufanele kuthathe imizuzu engaba ngu-15. Yiqiniso, isiguli kungase kunganeli, kodwa inhlama kufanele kube pliable, uphinde ukubhekana nezimo ezinzima. Ungakwazi phumuza isikhashana isikhashana, bese uqhubeke.
Awu uxove inhlama, ungaba ukuphumula, kodwa ngaphambi kwalokho okudingeka qiniseka ukumboza inhlama ithawula bese ushiye endaweni efudumele cishe amahora amabili, ngakho kukuwe izikhathi 2-3. Leli phuzu kubalulekile ungalahlekelwa uma usebenzisa inhlama nemvubelo ayithatha kuyadingeka ukuze ukuma baking amahora ambalwa. isitsha Plain, endaweni esekusithekeni efudumele eduze ibhethri enamanzi nethawula - konke okudingekayo ukukhulisa inhlama.
Ngemva kwamahora amabili, ungakwazi uqhubekele ukwakheka umkhiqizo. Sebenzisa ifomu ngomumo eyenziwe noma pigtail abayizimpumputhe, lapha umcabango wakho olungenamkhawulo. Dala wobuciko oyifunayo, ungafaka ngokuphepha inhlama bhaka embozwe ukupheka iphepha noma ufulawa. Kodwa ungafaki it kuhhavini ngesikhathi esisodwa. Inhlama kufanele siphumule isikhathi esithile, kuthatha isigamu sehora ukufika kuyoba okwanele. Ngalesi sikhathi, shisisa kuhhavini izinga lokushisa oyifunayo, mayelana 250-300S kwakwanele.
Bayobhaka isinkwa, kuyinto efiselekayo ukubeka phakathi kuhhavini, kuyoba lesikahle wokubhaka.
Phakathi baking ngeke wengeze umusi engadingekile e Ohhavini. Lokhu kungafezwa ngokuthulula ingilazi yamanzi ku-pan ezingenalutho phansi, futhi ngokushesha uvale umnyango. Sonke lesi sikhathi, emaminithi la-20, umnyango kuhhavini ngeke ukuvula, kungenzeka kuphela ekupheleni vele uvule phansi ukushisa ezingeni ophansi.
Omunye kumele ohlakaniphile akamane akholelwe nangesikhathi esibekwe iresiphi, njengoba akunzima ukuba abhake izinkwa kuhhavini, kodwa kubalulekile ukubukela kanjani baking iqala Browning. Ngokwesilinganiso, njalo isinkwa kubhakwa ihora, kodwa futhi kubalulekile ukucabangela isakhiwo kanye kwabantu isivivinyo kanye nezici kwesithando ngethusi.
Lapho isinkwa usulungile nje zisuswe kuhovini, ukuxubha ngayo ubisi noma ephukile Iqanda eluhlaza ukuthi uyonika luhlaza ekhethekile kamnandi. 20 amaminithi isinkwa baba ukuma, okungcono embozwe ithawula manzi lapho ukusika isinkwa akuyona sikhuntile. Uma izivakashi zakho ukuthola mayelana indlela ukubhaka isinkwa kuhhavini, ukuze ukhiqize elimnandi kangaka futhi okumnandi, uyokwazi ukwabelana kule formula emangalisayo efakazelwe. Bon appétit!
Eningiliziwe iresiphi charlotte zakudala ne apula
Carp, ephekwe eziko
Inhlangano phezulu isakhiwo ukuphathwa: izici, izimiso, izinhlobo